One of the best Travels and Tours & Car Rental Service in Myanmar | Yangon – Tokyo – Osaka – Kyoto – Nara – Osaka – Tokyo – Yangon
Yangon – Tokyo – Osaka – Kyoto – Nara – Osaka – Tokyo – Yangon
Coverage : Yangon – Tokyo – Osaka – Kyoto – Nara – Osaka – Tokyo – Yangon
Day 01. ရန်ကုန် – တိုကျို
ရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်ရှိ ANA Counter တွင် Check in ဝင်၍ ည (09:45)အချိန် တွင်တိုကျိုမြို့သို့ All Nippon Airways လေယာဉ် NH-814 ဖြင့်စတင်ထွက်ခွာပါမည်။
Accomodations : အိပ် – လေယာဉ်ပေါ်
Day 02. တိုကျို
နံနက် (6:50)အချိန် တွင် တိုကျိုမြို့ရှိ Narita လေဆိပ်သို့ရောက်ရှိပြီးဒေသခံဧည့်လမ်းညွှန်မှ နွေးထွေးစွာလာရောက်ကြိုဆိုပါမည်။ ထို့နောက် ရှုခင်းကြည့်ရှုရန်သွားပါမည်။ ဆက်လက်၍ Asakusa &Nakamise Shopping Streetတွင် လမ်းလျှောက်ရင်းဈေးဝယ်ထွက်ပါမည်။ ပြီးနောက် ဂျပန်ရှိအမြင့်ဆုံးတာဝါဖြစ်သောTokyo Sky TreeရှိTembo Deckသို့အလှဓာတ်ပုံများရိုက်ရင်းသွားရောက်လေ့လာလည်ပတ်ပါမည်။ နေ့လည်စာသုံးဆောင်ပြီးလျှင် Ueno Parkတွင် အလှဓာတ်ပုံများကိုလည်းရိုက်နိုင်ပါသည်။ ထို့နောက် Ameyako Marketတွင် ဈေးဝယ်ထွက်ပါမည်။ ပြီးလျှင် ညစာသုံးဆောင်ပြီးဟိုတယ်သို့ပြန်ကာအိပ်စက်အနားယူပါမည်။
Day 03. တိုကျို
ဟိုတယ်တွင် နံနက်စာသုံးဆောင်ပြီးလျှင် ဂျပန်နိုင်ငံရှိအမြင့်ဆုံး နှင့် နာမည်အကြီးဆုံးဖြစ်သောဖူဂျီတောင် (Mount Fuji)သို့ သွားရောက် လည်ပတ်ပါမည်။ ပြီးလျှင် ဂျပန်နိုင်ငံရှိအကြီးဆုံးဗုဒ္ဓရုပ်ထု ဇြစ်သောKamakura Buddhaရှိသောဘုရားကျောင်းသို့ သွားရောက် ဖူးမြော်ပါမည်။ ထို့နောက် တိုကျိုသို့ ပြန်ကာညစာသုံးဆောင်ပြီးဟိုတယ်တွင် အိပ်စက်အနားယူပါမည်။
Day 04. တိုကျို
ဟိုတယ်တွင် နံနက်စာသုံးဆောင်ပြီးလျှင် တိုကျိုမြို့ရှိနာမည်ကျော် အပန်းဖြေဥယာဉ် ဖြစ်သောTokyo Disneylandသို့ သွားရောက်ပြီးပျော်ရွှင်စွာလည်ပတ်ကစားပါမည်။ နေ့လည်စာကို Disneyland တွင် အရသာရှိစွာသုံးဆောင်ကြပါမည်။ ထို့နောက် ညနေစာသုံးဆောင်ပြီးလျှင် ဟိုတယ်တွင် အေးချမ်းစွာအိပ်စက်အနားယူပါမည်။
Day 05. တိုကျို – အိုဆာကာ
နံနက်စာကိုဟိုတယ်တွင်သုံးဆောင်ပြီးလျှင် ကျည်ဆန်ရထားဖြင့် အိုဆာကာသို့ သွားရန် တိုကျိုဘူတာသို့ သွားပါမည်။ (11:20) အချိန်တွင် အိုဆာကာဘူတာသစ်သို့ ရောက်ရှိပါမည်။ နေ့လည်စာသုံးဆောင်ပြီးလျှင် အိုဆာကာရဲတိုက် (Osaka Castle)သို့သွားရောက်လေ့လာလည်ပတ်၍ အလှဓာတ်ပုံများရိုက်ကူးကြပါမည်။ ဆက်လက်၍ အိုဆာကာရှိအဓိကဈေးဝယ်ရန်အကောင်းဆုံးနေရာ ဖြစ်သောShinsaibashi Shopping Streetတွင် ပျော်ရွှင်စွာဈေးဝယ်ထွက်ပါမည်။ ထို့နောက်ညစာသုံးဆောင်ပြီးဟိုတယ်သို့ပြန်ကာအိပ်စက်အနားယူပါမည်။
Day 06. အိုဆာကာ – ကျိုတို – နာရ – အိုဆာကာ
ဟိုတယ်တွင် နံနက်စာသုံးဆောင်ပြီးနောက် ကျိုတိုသို့ သွားရောက်လည်ပတ်ရန် စတင်ထွက်ခွာပါမည်။ ထို့နောက် ကျိုတိုရှိသမိုင်းဝင် အထိန်းအမှတ် ဖြစ်သောKiyomizu Templeသို့သွားရောက်လည်ပတ် ဖူးမြော်ပါမည်။ ဆက်လက်၍ နာမည်ကျော် သမိုင်းဝင် အဆောက်အအုံတစ်ခု ဖြစ်သောKinkakuji Templeသို့ သွားရောက် လည်ပတ်ပါမည်။ ထို့နောက် နေ့လည်စာသုံးဆောင်ပြီးနာရသို့ ဆက်လက်၍ ထွက်ခွာပါမည်။ ထို့ပြင် နာရမြို့တွင်ရှိသောတန်ခိုးကြီးဘုရားကျောင်း ၇ ခုအနက်တစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်သောကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးကြေးသွန်းဗုဒ္ဓရုပ်ထုကြီးရှိရာTodaji Templeသို့ သွားရောက်ဖူးမြော်ပါမည်။ ထိုမှတစ်ဆင့် နာရမြို့ရှိသမင်ပန်းခြံသို့ သွားရောက်၍ အလှဓာတ်ပုံများရိုက်ကူးရင်းအပန်းဖြေလည်ပတ်ပါမည်။ ပြီးနောက် နာရမှတစ်ဆင့် အိုဆာကာရှိ လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများရောင်းချသောYodobashiCamera Multimedia Umedaသို့ သွားရောက်လေ့လာလည်ပတ်ပါမည်။ ထို့နောက် ညစာသုံးဆောင်ပြီးနောက် ဟိုတယ်တွင် အေးချမ်းစွာအနားယူအိပ်စက်ပါမည်။
Day 07. အိုဆာကာ – တိုကျို – ရန်ကုန်
နံနက်စာကိုဟိုတယ်မှပေးသော Breakfast Box ဖြင့်သုံးဆောင်ပြီးအိုဆာကာမြို့ရှိ Kansai Itamiလေဆိပ်မှ လေယာဉ် NH-2176 ဖြင့် တိုကျိုမြို့ သို့ပြန်ပါမည်။ ထို့နောက် တိုကျိုမြို့ရှိ Narita လေဆိပ်မှတစ်ဆင့် လေယာဉ် NH-813 ဖြင့်ညနေ (4:05) အချိန်တွင်ရန်ကုန်မြို့ သို့ ပျံသန်းရောက်ရှိပါမည်။
All Nippon Airways ဖြင့် အသွားပြန် လေယာဉ် လက်မှတ်
ကြယ်(၃) ပွင့် အဆင့်ရှိဟိုတယ်ကြီးများတွင် (၂) ယောက်ခန်းများဖြင့် (၅) ညတာတည်းခိုစရိတ်များ
စားသောက်ဆိုင်များတွင် သီးသန့် ထပ်မံမှာယူသော Food & Beverage နှင့် လည်ပတ်သောနေရာများတွင် ရွေးချယ်ထား ခြင်းမရှိသောကစားခြင်းများ
ဟိုတယ်တွင် Mini Bar နှင့် အဝတ်လျှော် Service များအသုံးပြုခြင်း နှင့် ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု (အခန်းသော့ ၊ သဘက်အစရှိသည့်)
မိမိ Luggage အားအခန်းတွင်းသို့ သယ်ဆောင်ခ
Airline မှ သတ်မှတ်ထားသောအလေးချိန်ထက် ဝန်ပိုသယ်ဆောင်ခ